Јоко Висина ™ дуал Ђон 2013 Нови Техника | цалл: 09897304484...
gurigaYoko & Oka Work?Barnaamijka DhererkaGrow dhaadheer?qaalisanOrder HaddaNala soo xiriirTalooyin
Daal ahaansho Short? Ma rabtaa inaad Grow Sida dheer Sida Your Friends? Waxa aan rajaynayaa in ay helaan Kuwa dhowr inji dheeraad ah & Is-Kalsoonida?
Discover u kordhin Dhererka Device Kacaanka kugu caawin kara inaad Grow inaga oo kordhin kara Dhererka si dabiici ah Just 3 Months ... Balanqaad!
Kordhinta kala Dhererka Products
In la soo dhaafay dhawaan , SIISEY Asian ayaa ku dadaashey xagga jawaabaya dhibaatooyinka bulshada caadiga ah saamayn ku xubnaha bulshada . In nidaamka tahay tallaabada ay cusub , khubarada qaar ayaa loogu talagalay kaliya in kab ka shaqeeya yaabab , waayo dadka jir ahaan gaaban a . Calaacalaha cagahoodu kabaha Kuwaas , kuwaas oo si ballaaran loo yaqaan Yoko ah iyo kororka height qalabka Oka u heshay ururna ee Asian iyo xataa inta kale ee dunida . Waxay ka shaqaysaa leh mabaadii'da farsamada a Chinese ku salaysan fikirka ah Reflexology in acupuncture . Gudahood suuqa Asian , kabaha tani waxaa la suuq sida increaser height ah . Marka laga eego wax ku ool ah , waxaa si waxtar leh ay kordhin karaan height jidh ahaaneed ee shaqsiyaadka oo da 'walba iyo labada jinsi . Si ka duwan isticmaalka hormoonnada koritaanka aadanaha , horumarinta ay xoogga saaraan in qalab u shaqeeyo kordhiyo qof height iyadoon wax saameyn liddi ah .
Marka laga eego nafleyda , height jirka waxaa gacanta ku horumarka lafo dheer habka qalfoof samaynta ilaa . La qabsiga ee cabbirka iyo qaabka kuwaas oo lafaha dheer ku tiirsan tahay saameynta ay hormoonnada koritaanka . Hormoonnada koritaanka Kuwan waxaa secreted by Grand pituitary ee la soo tilmaamaha ka yimaada maskaxda . Shaqsiyaadka sida caadiga ah la kordhiyo in height iyada oo baaluqo ku dhowaad 25 sano . Mararka qaarkood , koritaanka istaago hore marka qof ayaa soo gaarin height ah si xooga caadiga . Xaaladda Waxay tani dhacdaa sababtoo ah qanjirka masuul ka istaago sii daayo hormoonnada koritaanka ; halkan ka keenaya lafaha si wadajir ah u dhimmin ka hortagga korodhka dheeraad ah oo ku height . Sida macnaha guud , height Yoko u kordhin kara shuqullada kabaha by Abaabulka sii daayo hormoono ah koritaanka by qanjidhada pituitary ee . Jirku wuxuu u nidaamka vertebral ee qaybta jir ah joogayo xor ka falayshay oo dhan hal iyo xoogsashada . Taas macnaheedu waa in kabaha loo dhiirrigeliyo doono koritaanka lafaha dheer ee qaybtan , taasoo keentay in korodhka dhererka .
Marka laga soo tago saameynta elongation si toos ah nidaamka vertebral toosan , Yoko iyo calaacalaha cagahoodu Oka wanaajisaa caafimaadka wanaagsan by fududeynta wareegga dhiigga , hagaajinaysaa dheefshiidka , dabadeedna wuxu leyahay heerka -shiid cuntada . Taas macnaheedu waa in jirka oo waxay yeelan doonaan nafaqooyin badan la isticmaalo ujeeddooyin korniinka iyo horumarka . Waxaa ka mid nafaqooyinka ka tari karin waxaa ka mid ah xubno ka ah sida Calcium iyo fosfooraska , taas oo lagama maarmaan u ah ee dhismaha of a qaab-dhismeedka qalfoof xoog leh . Xaaladdan oo kale , dhinaca of heerka caafimaadka iyo -shiid fiicnaado jirka wuxuu siiyaa qaybood ayaa dheeriga ah ee kordhinta height . Duceyneynaa , waxaan maqsuud karo xaqiiqada ah in ay calaacalaha cagahoodu labada Yoko iyo Oka ka shaqeeyaan sidii la mideeyo caafimaadka dhowr iyo dhinacyo hormoon ah in ay bilaabaan wada socodka ah koritaanka vertebral .
Yoko increaser height ku timaadaa qaab ah ee ay cagaha caag ah dhammaday ka yar kab ah . Dhinaca kale , Oka waa Insole ah kooxda kaalinta gudaha kab ah . Labada qalabkani ku fuliyo hawlahan ku dhaca qanjidhada ka masuul ah loo sii daayo ee hormoonnada koritaanka madadaalo u . Si la ogaado jawaabta muhiim ah , dadka isticmaala waa inay xidhaan waddada kaliya ee ugu yaraan 40 daqiiqo maalintii , iyo halka lagu socdo si xawli ah soo dhaqso ah . Sidaa darteed , ah oo dhan baahida shakhsiyeed la sameeyo waa in ay xirtaan iyo cedhib oo soco . Ujeedada ugu weyn waa in la hubiyo in kaliya in ay gudaha kab ku ayaynaasuhu ka mid ah Gaartay socodka . Results bilaabi kartaa naxli muddo saddex bilood gudahood ah . Wixii saamaynta suurad wacan ugu badnaan , iyo cedhib in la xirto karaa ilaa 12 bilood . Waxaan ahay 28 iyo ay joojiyeen kordhaya for the 6 sano ee la soo dhaafay. Ka dib markii la isticmaalayo sheyga aad, ayaan bilaabay koraya mar kale! Sidee cajiib
Kaliya waxaan jeclaan lahaa in aad sheegto alaabta waa laga cabsado. Waxaan koray laga bilaabo 5 "2 10 bilood ka hor ilaa 6" 1. Anigu ma aan rumaysan karin. Yoko waa run ahaantii la yaab leh. Roter, Japan
Click to akhrisan faahfaahinta
Haddii aad rabto in aad u koraan dhaadheer, akhrin this ...
Kumanaan cadaymood Sayniska iyo caafimaadka.
BILAASH "Dhererka Gain Exercise" e-book
Wax walba waa ay taageerayaan By a 100% Guarantee EBER Khatarta ... Plus aad haysato dhamaan gunooyinka
Sababaha waa maxay sababta aad u bilaabi Yoko
Copyright 1994, All rights reserved by www.yokoheight.org